I-Apple Park ijongeka inomdla ngaphakathi | Ndisuka mac
Sele siyibonile eminye imifanekiso yangaphakathi yesakhiwo kwizihlandlo ezidlulileyo kodwa oku bekuphakathi kwenkqubo yokwakha kwaye bengakhange bajonge kwiinkcukacha zeli sakhiwo sikhulu, yayiluluthotho lweefoto ezinomdla ngaphandle kokugxila kakhulu kwiinkcukacha. Le mifanekiso ivela kuDisemba ophelileyo kwaye kwabo bafuna ukuyibona kwakhona siyahamba apha ikhonkco, kodwa ngeli xesha limalunga neefoto ezinenkcukacha ngakumbi zangaphakathi kwezinye iiofisi eApple Park kwaye kule meko iifoto ezivela kwi-Wired ziyamangalisa ngokwenene.
Asifuni kuphoswa zinkcukacha zomfanekiso apho ungabona khona ukuba bazokubeka phi ii-pizza eziza kuthengiswa kwi-bar ye-Apple Park yabasebenzi kunye neendwendwe, i-shooter "eyaziwayo" ebize ngaphezulu konyaka kunye isiqingatha sokuyilwa esenziwe ngealuminium engabonakalisi naluphi na uhlobo lokujija okanye ukukhawulezisa emehlweni, ukongeza Imizobo yoqobo kaNorman Foster, uyilo lweApple Park. Ngokucacileyo le yinxalenye encinci yendawo yonke ebiyelweyo enkulu:
Kuyo sinokubona iinkcukacha zeringi engaphandle eya kuthi ibonakalise ubushushu ukongeza ekusebenzeni ukuvumela umoya ukuba udlule, iiphaneli zelanga eziseluphahleni (ethi, ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo kwividiyo yokugqibela, ayisasebenzi ibiyele eorenji) kunye neenkcukacha zomncinci kodwa ukukhanya okwaneleyo abaya kuba nako kwiiofisi. Ngamafutshane, kancinci ngakumbi le nto sifuna ukuyibona, ingaphakathi lale ndawo intle yeApple Park esele igqityiwe kwezinye iindawo. Inqaku elipheleleyo linokufundwa apha Wired ngeenkcukacha ezithile malunga nesakhiwo, ngoku sinokungabaza ukuba abasebenzi bokuqala sele befikile bekulindelwe kule nyanga ka-Epreli kwaye ngokuqinisekileyo bafuna ukukhulula isakhiwo segosa elitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple Park ijongeka inomdla ngaphakathi